Bangladesh: Firenena latsaka an-katerena, loharanom-baovao ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2018 4:41 GMT
Nahita fiovana lehibe i Bangladesh vao haingana. Ny alakamisy alina, nanambara firenena latsaka an-katerena ny filoha Iajuddin Ahmed ary nametra-pialàna amin'ny maha-lehiben'ny governemanta vonjimaika azy, izany no fitakiana voalohany nataon'ny firaisamben'ny mpanohitra. Nahemony ihany koa ny fifidianana amin'ny 22 janoary, izay voalaza fa efa vita ny dingana amin'izany. Drishtipat Blog manana famintinana fohy momba ny hetsika izay niatendro nankany amin'ny maha-firenena latsaka an-katerena azy.
Nidina an-dalambe ny miaramila ary napetraka ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 11 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina. Ankoatra izany, noraràna tamin'ireo fantsona fahitalavitra tsy miankina maherin'ny 10 ao Bangladesh ihany koa ny fampielezam-baovao ary nolazaina mba tsy hamoaka na inona na inona mitsikera ny hetsika ataon'ny governemanta ireo mpanao gazety. Niforona araka izany ny fahabangan'ny vaovao farany, satria latsaky ny 1% ny fidirana aterineto any Bangladesh. Niezaka ny hahatakatra ny tena zava-mitranga ao Bangladesh ny olona.
Na izany aza, nandray anjara tamin'ny fanangonana vaovao ireo bilaogera Bangladeshita ary naneho ny heviny rehefa niha-nivoatra tsikelikely ny fisehoan-javatra. Araka ny tatitra nataon'ny Guardian News Blog, dia nanome fanazavana momba ny alina ara-politika mampalahelo ho an'ny maro eo amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny aterineto ireo bilaogera Bangladeshita.
Ny ampitso, nesorina ny sakana tamin'ny gazety sy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ary nesorina ilay olona nampisy adihevitra izay nametraka ny sakana. Nanasazy ireo mpanao politika sy mpandraharaha mpanao kolikoly ahiahiana ny governemanta, fihetsika izay nankasitrahan'ny olon-tsotra.
Na dia nisy aza ny sasany nanontany tena, somary nankasitrahan'ireo Bangladeshita ihany ny fametrahana ny firenena latsaka an-katerena, satria mety hanome azy ireo fialan-tsasatra manoloana ny fitokonana sy ny sakan-dalana tsy misy fiafarana izay manohintohina ny firenena. Ny tena mampanahy amin'ny zavatra atrehin'ny firenena ankehitriny dia ny fampiharana ny didim-panjakana momba ny firenena latsaka an-katerena izay manohintohina ny zo fototra rehetra ary mametraka ireo mpitantana ho ambonin'ny lalàna. Amin'ity lalàna ity, ankoatra ny hafa, afaka mifehy na manakorontana na manakana izay hafatra na vaovao amin'ny alàlan'ny paositra, radio, telegrama, telex, fax, aterineto sy finday ny governemanta. Izay olona mitsikera ny governemanta dia mety hiatrika fiampangana henjana hatramin'ny sazy faran'izay ambony [famonoana ho faty].
Nisy ireo bilaogera sasany namazivazy raha tokony hanomboka hanoratra momba ny fiainany ara-nofo izy ireo na momba izay hohanin'izy ireo fa tsy resaka politika fotsiny mba hisorohana ny olana. Na izany aza, raha ny marina, tsy nanakana ny tenan'izy ireo tsy hanoratra ny heviny izany saingy mitandrina ny lalàna.
Sid of Serious Golmal manontany hoe:
“Izany ve no demokrasia izay tsy nahomby tao Bangladesh sa ireo politisiana no tsy nahomby tamin'ny demokrasia ao Bangladesh?”
Nandritra izany fotoana izany, notendrena ny lehiben'ny Governemanta vonjimaika vaovao sy mpanolo-tsaina dimy, izay neken'ny mpanohitra sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ankehitriny dia afaka manantena ny olona fa hisy ny fifidianana azo antoka sy malalaka ary madio.
Misy ny adihevitra mandeha raha toa ka lalàna miaramila afenina ny firenena latsaka an-katerena ary tsy manana fahefana feno amin'ny tafika ny filoha. Na dia marina aza izany, tahaka ny fanonganam-panjakana tsy dia nisy rà latsaka vao haingana tany Thailandy tsy anoheran'ny Bangladeshita ny tafika ity toe-javatra ity. Mety ho ity no fahafahana tokana eo amin'izy ireo mba hamerenana indray ny demaokrasia miasa aorian'ny fifidianana.